openSUSE 12.3 + ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။ | Linux မှ
DesdeLinux မှသူငယ်ချင်းများ။ တရားဝင်ပါပြီ ဖြန့်ချိ openSUSE 12.3 :) ဒီ post မှာတော့မင်းကိုပြမယ် ဒီစံနမူနာဖြဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ.. လုပ်သာလုပ်။
Linux သူငယ်ချင်း OpenSUSE ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက၊
sudo ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သောအင်တာနက်ပြသမှုဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများစွာသည်။ ၎င်းကို activate လုပ်ရန်သူတို့သည် console ၌ရေးသားရမည်။
root password ကိုထည့်ပါ
အသုံးပြုသူ (မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်) ကသင်၏အမည်ကိုထည့်ပါ။ မျက်တောင်ခတ်အမှတ်အသားများနှင့်အလွန်သတိထားပါ၊ ဖျက်ပစ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ရေးပါ၊
အပို Repositories ထည့်ပါ
၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ application menu တွင် YaST ကိုဖွင့်ပြီး Software> Software Repositories သို့သွားပြီးထိုတွင်« Add »ကိုရွေးပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော window တွင်« Community Repositories »ကိုရွေးချယ်ပါ။
El တော့ openSUSE များသောအားဖြင့် wifi နဲ့ပြproblemsနာမရှိပါဘူး ဒါပေမယ့်ဖြေရှင်းနည်းကမင်းကိုဖြစ်ပျက်လာရင်အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ console ကိုရိုက်ပြီး root ကဲ့သို့ log in လုပ်ပါ။
su (Enter ကိုနှိပ်ပါ)
သင့်စကားဝှက်ကိုရေးပါ (Enter ကိုနှိပ်ပါ)
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware (Enter နှိပ်ပြီးညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး flash, java စသည့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုတပ်ဆင်ပြီး Opensuse Pacman ရှိအကောင်းဆုံးသိုလှောင်ရုံများကို -
ဂရပ်ဖစ်များကို OpenSUSE 12.3 တွင်တပ်ဆင်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ (သင်၏ကဒ်ဗားရှင်းကိုရိုးရိုးလေးနှိပ်ရုံဖြင့်အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားသည်):
Radeon HD5xxx နှင့်နောက်ပိုင်းကဒ်များအတွက် -
Radeon HD2xxx အတွက် HD4xxx ကဒ်များဖြင့်:
ဒြပ်ထု (ရိုးရိုးလေးကလစ် နှိပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်) -
GNOME, XFCE နှင့် LXDE အတွက် - http://opensuse-community.org/codecs-gnome.ymp
KDE အတွက် http://opensuse-community.org/codecs-kde.ymp
သင်မလွတ်နိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ (YaST ကို Graphic Mode ဖြင့် Graphic Mode တွင် သုံး၍ Application မ်ား၊ « Install / Remove Software »မှ)
gimp, k3b, vlc, rar, unace p7zip-full p7zip-rar, အော်ပရာ, ခရိုမီယမ်, devede, transmageddon, brazier ။
Terminal မှဒီ command ကို update လုပ်ရန်လိုသည်။
အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဒီ distro ကိုခံစား။ မှတ်ချက်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်
ငါသည်သင်တို့ကိုသစ်ကို openSUSE 12.3 ၏ဗီဒီယိုထားခဲ့ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » openSUSE 12.3 + ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်။ ကျွန်တော့်အမြင်နှင့်အတွေ့အကြုံအရ၎င်းသည် 64-bit level ရှိ Chakra နှင့်အတူအကောင်းဆုံး distro ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်။ တည်ငြိမ်ပြီးကြံ့ခိုင်သည်။
x64 Mint အလုပ်လုပ်သောကျည်ဆံဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ openSUSE ဟာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုပါ
ရပါတယ်။ ငါ့အရသာအတွက် Chakra ဟာ Yast လို tool တစ်ခုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေ့ကပြီးပြည့်စုံတဲ့ distro ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး Yast ဟာ Linux ပေါ်ကအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာပါ။
ဒါဟာ Yast အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် xD မှာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး
ငါ multiarch distro ကြိုက်တတ်တဲ့။ ဒက်…။
GRUB သည်အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ Grub ပြproblemနာသည် SUSE တွင်အမြဲရှိသည်။
12..2 ကြီးကြီးမားမားသွားနေပြီ။ ဒီအသစ်ကိုပြောင်းတာဘာကြောင့်လဲ။
YAST ကိုထည့်ပါ။ NetworkManager ကိုပုံမှန် network manager အဖြစ်ထားပါ။ NetworkManager ကပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကိုမစီမံသောကြောင့်ဤနည်းဖြင့်သင်၏ network ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ပထမဆုံး zypper update နှင့်အင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည် Grub ပြcorrectနာကိုဖြေရှင်းပြီးမွမ်းမံချက်များကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
Radeon HD2xxx မှ HD4xxx ကဒ်များအတွက်မူကား Xorg 1.12 အထိအထောက်အပံ့ပေးသည်။ distros များသည်လပေါင်းများစွာဗားရှင်း 1.13 ကိုအသုံးပြုနေသဖြင့်စီးပွားဖြစ်ကားမောင်းသူသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့က Kernel 3.7 နဲ့လုပ်သလိုပဲရှေးဟောင်းကားမောင်းသူနှင့်ပြtheနာကို patch ဖြင့်ဖြေရှင်းပေးမည် ငါကအချိန်ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အခုတော့ဒီကဒ်တွေအတွက်အခမဲ့ယာဉ်မောင်းတွေကယနေ့လုံး ၀ မကောင်းဘူး
၎င်းသည် kernel ကိုထောက်ပံ့ရန်တစ်ခုနှင့် xorg ကိုထောက်ပံ့ရန်တစ်ခုမှာ xorg အတွက် patch ပြုလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် amd ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါ Linux ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ AMD ကိုဝယ်ယူခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ။ Nvidia သည်အနည်းဆုံး kernel နှင့် xorgs အသစ်များကိုအထောက်အပံ့ဖြင့်အမွေယာဉ်မောင်းအသစ်များကိုထုတ်ပေးသော်လည်းမထွက်ပါ။
မနေ့ကအထိ OpenSUSE 12.2 ဟာကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှနောက်တစ်ခုသို့ ၁၂.၃ distro အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ပြီး GRUB သည်ကျွန်ုပ်အားအသိအမှတ်ပြုရုံသာမကအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Suse ကကျွန်တော့်ကိုပြproblemsနာဖြစ်စေတဲ့ Disk နေရာမှာပဲ Netrunner 12.12 ကိုကျွန်တော်ပဲ install လုပ်လိုက်သည်။ GRUB သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်သောနေရာမှအင်တာနက်သို့ကောင်းမွန်စွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Netrunner ကငါပြောမယ့် Kde ဆိုတာ SUSE ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကပိုဆိုးတာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည် SUSE ကဲ့သို့ခေတ်မမီနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုဒုက္ခများစွာဖြစ်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြsolနာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ်ကျွန်မမှာမည်သည့်ဒရိုင်ဘာကိုမှတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ် OpenSUSE DVD ဖြင့်သာတပ်ဆင်ပြီးသောအခါ GRUB သည်ကျွန်ုပ်အားမသိရှိဘဲအင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။
ကောင်းသော« 12.3 »ထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
သူမအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါသိရသောအကောင်းဆုံး distros တစ်ခုမှာ Linux ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ArchLinux hehehe နှင့်ငါနေ၏
ဒီဗီဒီယိုဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဗီဒီယိုပြသတဲ့ KDE လှည့်ကွက်များစွာကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။
ဒါကိုမွမ်းမံရကျိုးနပ်ပါသလား။ ငါ့မှာ KDE 12.2 နဲ့ 4.10 ရှိတယ်။ ဒါကောင်းတယ်။
ငါအခု update လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါမှာထပ်တူပုံစံမျိုးရှိတယ်။ ငါသာရှင်သန်မယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်ငါပြောမယ်🙂
၂၀၁၃ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းနှင့်ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူ operating system ကိုအပြည့်အဝ install လုပ်ခြင်း? သမိုင်းမအသံ
zypper dup တစ်ခုတည်းသာလုံလောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင် update သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းပရိုဂရမ်အချို့နှင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ပြproblemsနာများကိုပြင်ရန်ထက်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပိုကောင်းသည်။ အားလုံးသည်အထူးသဖြင့်မည်သည့်အသုံးအနှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ။ 🙂
Fedora ကိုအစားထိုးဖို့အခုချိန်မှာ download လုပ်ပါ။ ယခုငါ Arch + Gecko ဖြစ်လိမ့်မည်။
မြင်ရတာဝမ်းသာတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခု - မင်းဘာကြောင့် Fedora ကိုအစားထိုးနေတာလဲ။
OpenSuse သည်စာကြည့်တိုက်များ၏နှစ်ရှည်ပြproblemနာရှိနေသေးသလား။ မင်္ဂလာပါ
ငါ 11.0 ကတည်းက openSUSE အသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့ပြီးစာကြည့်တိုက်များနှင့်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။
စာအုပ်ဆိုင်တွေနဲ့ပြaနာမရှိခဲ့ဘူး။ ငါဘယ်တော့မှပြေးလို့မရဘူးဆိုတာက virtual machine တွေပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါကလက်တော့ပ်ပေါ်မှာရှိတယ်။ ငါအများကြီးဘောလုံးမပေးဘူး။
သင် Virtualbox repo ကို install လုပ်ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းလိုက်သည်။
openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 အတွက် Repo:
a ပြီးနောက်: zypper update ကို
zypper ကို Virtualbox-4.2 ထည့်သွင်း
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၂.၂ ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီး mint kde အဖြစ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မကြာသေးမီကဆူညံသံကိုစတင်စေသော netrunner 12.2 distro ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် mint ထက် ပို၍ လေးလံသည်။ ယခုအချိန်တွင်ငါ mint kde ကို netrunner နှင့်တူအောင်ပြောင်းလဲတော့မည်။ လေးစားပါတယ်
ပထမတစ်ခုက openuse script သည်အခမဲ့ braodcom drivers များကိုပြုပြင်ရန်ယူဆောင်လာသည်။ ငါ့မှာ Laptop တစ်လုံးရှိတယ်။ အဲဒီအခမဲ့ဒရိုင်ဘာတွေကငါကြိုးစားခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကြောက်ကြောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Broadcom သည်ထူးခြားသောစီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများ (broadcom-wl) ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မကောင်းသောအရာက၎င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော်လည်းငါဆိုသည်ကား၎င်းတို့သည် atheros နှင့်အခြားထုတ်လုပ်သူများမှအခမဲ့ drivers များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ မကောင်းတာကပထမ ဦး စွာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလိုအပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်း မှလွဲ၍ မည်သူမျှ installation discs များတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ opensuse 2011 မှာသူတို့ packman repository ထဲမှာရှိနေပြီး openuse ဖြန့်ဝေသောကွဲပြားခြားနားသော kernels များအတွက်ပြုစုသည်။ အမှန်မှာ packman ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သူတို့သည် 12.2 အတွက်စုစည်းထားပြီး ၃.၈ kernel နှင့်အတူ tumbleweed ပြေးနေသည်။
ပြီးတော့ openuse 12.2 ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော့်ကို atheros driver အချို့ပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။ အခမဲ့ဒရိုင်ဘာအားလုံးနီးပါးဟာ kernel-firmware package ထဲကိုရောက်လာကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် broadcom မဟုတ်ဘဲ hardware နဲ့ပတ်သက်ရင်တို့ထိရမယ်။
ဘာကျန်သေးလဲ။ sudo ကိုပြုပြင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်း။ ဒါကကြောက်ဖို့လား။ တစ်ခါမှမကြိုးစားခဲ့ဖူးသူအားလုံးအတွက် Opensuse သည်ကြီးမားသောထိန်းချုပ်မှုစင်တာဖြစ်သော YaST ဟုခေါ်သည့်အလွန်ကောင်းသောသားရဲကိရိယာကိုသယ်ဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်ပြတင်းပေါက်များမှတစ်ခုထက်ပိုကြီးပြီးအံ့ဖွယ်အမှုများပြုရန်သင်ခွင့်ပြုသည်။ Ubuntu နှင့် Mint တို့ပင်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမျိုးမဆောင်ကြပါ။ Drake (Mandriva နှင့် Mageia) + PClinuxOS တို့သာအလားတူအရာတစ်ခုယူဆောင်လာသည်
Terminal မပါဘဲသင်လုပ်နိုင်သောပုံမှန် distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောကြောင့်ငါကြိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်မိသားစုရှိကွန်ပျူတာအားလုံးတွင် Opensuse ရှိသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ ၎င်းကိုချိုးဖျက်ရန်ခက်ခဲပြီးမည်သူမျှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗားရှင်း 12.2 တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ငါ upgrade လုပ်တယ်။ နောက်လာမယ့် ၁၃.၁ ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ရမယ်၊ မပြဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းအထောက်အပံ့နဲ့ဒီကိုသုံးမယ် (၁၈ လပဲပြောသူတွေအတွက်)
Ahh, ထို libreoffice repos ရှိသူများ, သင်ယခုစိတ်ဝင်စားပြီး၎င်းသည်တည်ငြိမ်မှုရှိခဲ့လျှင်ယခုသီတင်းပတ်အထိဗားရှင်း ၄ ကိုတက်သွားခဲ့သည်။ openuse အာမခံချက် (အလွန်တက်ကြွသည့် libreoffice developer များ)
အဆိုပါဇာတ်ကြောင်း၏အဆုံး။ သင်လုပ်နိုင်လျှင် Broadcom အရာကိုပြင်သင့်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့မသိသောအရာများကိုမသိဘဲမလုပ်မိအောင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မလိုအပ်ဘဲ (ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်) ။
Broadcom wifi drivers နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် openSUSE စာမျက်နှာမှတရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာပေးသည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ် Broadcom bcm43xx wifi နှင့်ဘာပြသနာမှမရှိခဲ့ပါ။ ငါသတင်းအချက်အလက်ရရှိရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါသည်:
sudo နှင့် Yast တို့နှင့် ပတ်သက်၍ .. ငါ sudo configuration ကိုဤကဲ့သို့သောနေရာတွင်ထားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနည်းအားဖြင့် mouse ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲ super fast ဖြစ်သည်။ Yast နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်သဘောတူသည်မှာ၎င်းသည် openSUSE တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ငါဒီလမ်းညွှန်ကိုငါသိတယ်၊ မင်းကိုငါပြောပြီးပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကလှည့်ပြီးနေ့တစ်ဝက်လောက်မှာ atheros ပြissueနာအတွက်အဖြေရှာဖို့ရှာခဲ့တယ်၊ ထိုအချိန်က 12.2 ဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ opensuse installer သည်အလွန်စိတ်သောကရောက်ပြီးရံဖန်ရံခါပconflictsိပက္ခများနှင့်ပြfaနာများဖြစ်ပေါ်နေသော configurations များကို installation လုပ်စဉ်အတွင်း wifi ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမဟုတ်ပါ၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ) Fedora 18 တွင်ဤ installer သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သော်လည်းငါ post installation ကိုပြန်လည်စတင်သောအခါသူသည် configuration ကိုကောင်းမွန်စွာသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်တွင်တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း Wi-Fi ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ပြုပြင်ရန်အချိန်ရှိပါလိမ့်မည်။ ဒါက wifis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြallနာအားလုံးကို broadcom ကပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးချင်တာပါ။ Broadcoms သည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ ၈၀% တွင်ပြtheနာဖြစ်သော်လည်းအခြားဖြစ်ရပ်များတွင်အခြားတစ်ဖက်မှလာသည်။
Opensuse zypper သည်တခါတရံထာဝရတည်မြဲပုံရသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်လျှင်၊ ထို့နောက်၎င်းကိုသင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေ libreoffice နှင့် kde ကဲ့သို့သောများစွာသောပရောဂျက်များတွင်စာရင်းသွင်းပြီး၎င်းတို့ကို suse အတွက်အလွန်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
repos သည်ကြီးမားသည်၊ အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ဦး စားပေးမှုများကိုကောင်းမွန်စွာ configure လုပ်ထားပါကအလွန် beastly distro တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ debian တွင်ပျောက်နေသည်မှာ apt-pinning သည်ရှုပ်ထွေးမှု၏ငရဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး synaptic သည်၎င်းကို graphical ဖြင့်ကိုင်တွယ်သင့်သည်။
ငါအရာအားလုံး၌သင်တို့နှင့်အတူသဘောတူ :) တပ်ဆင်နေစဉ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Wi-Fi ကို configure မလုပ်သင့်ပါ။ အမြဲတမ်းတိုက်ရိုက် install လုပ်တယ် (live mode ကိုဘယ်တော့မှမ run ဘူး။ အဲ့ဒီကနေ system ကိုဘယ်တော့မှမသွင်းဘူး) ။ Repos သည် Debian နှင့် Ubuntu ထက်သာလွန်သည်။
OpenSUSE သည် KDE အတွက်သာမကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် xfce, gnome နှင့်လည်းကောင်းမွန်သည်။ ငါသဘောကျတယ်။
OpenSuse ဟာကျွန်တော့်ကိုလူကြိုက်အများဆုံးဖြန့်ဝေမှုတွေထဲမှာအမြန်ဆုံးတပ်ဆင်နေပုံရတယ်၊ ရှိပြီးသားဖြန့်ဖြူးမှုကိုအလွယ်တကူ“ နှိပ်စက်” နိုင်တယ်၊ အဲဒါကငါ GNU / Linux မှာစတင်တုန်းကငါ့အတွက်ကောင်းတယ်။ ငါပျက်သွားသည့်စာကြည့်တိုက်များအကြောင်းပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းဝေးကွာသွားစေသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် Fedora 18 နှင့် Xfce 4.10 နှင့်ယခင်က OpenSuse အတွက်အခန်းကန့်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး KDE ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြန့်ဝေခြင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ မင်္ဂလာပါ
OpenSuse ကို install လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်များစွာသောအင်တာနက်ကဲ့သို့သောပြသနာများရှိခဲ့သော်လည်း Yast> Network Settings> Global Settings သို့သွားပြီးဒီ tab ထဲတွင် networkmanager ကို enable လုပ်ပါ။ grub နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးအဲဒါကို install လုပ်ဖို့အရင်က install လုပ်ထားတဲ့ system ကိုမချေဖျက်ဘဲ partition တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရမယ်။ မင်္ဂလာပါ
Hello Ferran: Open SUSE နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ရှင်းပြချက်မှာအနည်းငယ်ပိုပြီးတိတိကျကျပြောနိုင်မလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါအဲဒီမှာအတိအကျကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဘာမှမရခဲ့ဘူး။ GRUB နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ Live CD ကိုသွင်းထားရတယ်၊ GRUB ကိုပြန်ပြီးထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရှိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ GRUB ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်လေးစားစွာဖြင့်။
OpenSuse 12.3 ကိုလွှတ်ခြင်း။ မင်္ဂလာပါ
အွန်လိုင်းကိုအလွယ်တကူဖွင့်ရန် openSUSE 12.3 ကိုသင်ဤဆောင်းပါးကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
@chaparral ပထမ ဦး ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ Linux ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာဘုံအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ OpenSuse ကိုမထည့်သွင်းမီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Fedora 18 ကို Xfce 4.10 နှင့် 715 Gig capacity hard disk ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးပါပြီး၎င်းတွင် Fedora အတွက် 400 gigs ခွဲဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း gigs 300 format နဲ့နောက်ပိုင်းမှာ format ဖို့အခမဲ့ထားခဲ့တယ်။ ငါကအစမှစ။ grub ရှိရန်ငါပေးသောအကြံဥာဏ်မှာ OpenSuse ကိုသင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းအခြားလည်ပတ်မှုစနစ်၏ထိပ်တွင်မဟုတ်ပါ။ တပ်ဆင်သည့်အခါ၎င်း၏အခန်းကန့်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ DVD ဗားရှင်း (အပြည့်အဝဗားရှင်း) ဖြင့်လည်း install လုပ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် "foul" အတွက် OpenSuse နှင့် Kde တွင် networkamanager ကိုမရွေးထားပါကဤအဆင့်ကိုသင်လက်ဖြင့်လုပ်ရန်လိုသည်။ ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။ YAST >> ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များ >> ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွေးစရာများ >> ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်ပါ။ အသုံးပြုသူအားကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ နည်းပညာဆိုင်ရာဘာသာစကားမရှိဘဲသင်၏ပြyourနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
ကောင်းပြီ၊ ဟက်ဟဲ၊ ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။ ငါအလှည့်မသိရပါဘူး Yast ကိုနှိပ်ပါ Yast ရှိခြင်း (စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခြင်း)၊ ရွေးချယ်စရာကိုးခုရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုနားမလည်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
ငါသည်ဤကြော်ငြာပျို့အပေါငျးတို့သပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီးသင်ညွှန်ပြသောအရာကိုမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် OpenSuse ကိုအကြိမ်များစွာတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးထိုပြသနာသို့မ ၀ င်ပါ။ လာမည့်ပို့စ်တွင် (ဤသည်ကိုကြာမြင့်စွာမလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက်) Suse 12.3 ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့မည်ပုံတပ်ဆင်နိုင်ကြောင်းသင်ပြောပြပါမည်။
@chaparral မည်သူမျှမွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်မည်နည်း GNU / Linux သည်၎င်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အမြဲထည့်သွင်းသည်။ သင်သည် YAST >> Network Devices (4) >> Network Preferences >> Global Options >> သို့ သွား၍ NetworkManager ကိုရွေးချယ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ferran ။ နောက်ဆုံးတော့မင်းဘာပြောနေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်လာပါပြီ။
Yast> ကွန်ယက်ထုတ်ကုန်များ> ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များ> Global Options> ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အသုံးပြုသူမှ NetworkManager မှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်ထားသော” ရွေးစရာကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ သင်မှန်သည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးပြtheနာပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပညတ်အချို့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်လေးစားစွာဖြင့်။
@chaparral သေချာတာပေါ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်ယူစရာအသစ်တစ်ခု၊ အခုငါ OpenSuse ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လက်နက်အသစ်တွေရှိနေပြီ၊ ငါပြောခဲ့သလိုပဲအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုလက်နဲ့ကိုင်တွယ်ရမယ်။ မင်္ဂလာပါ
အို Ferran အိုကေ။ ငါထင်တာကတော့ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ bug ဖြစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်ထွက်တဲ့ဖြန့်ချိမှုကို install လုပ်ဖို့မအကြံပြုထားဘူး။ ရက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်အဆင်ပြေသည်။
@chaparral ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားများကိုဖြေရှင်းရန်စောင့်ဆိုင်းရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက၊ မထည့်သွင်းခင်သင့်အားအကြံပေးလိုပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
ကောင်းပြီ Ferran .. Fedora နဲ့ openSUSE ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုပိုနှစ်သက်မလဲ။
OK Ferran၊ ခင်ဗျားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သက်သေပြနိုင်ရင်ပြdocumentနာကိုဖြေရှင်းဖို့မင်းရဲ့အကူအညီကိုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို OpenSUSE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတများစွာနဲ့မင်းဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ သူတို့ကိုမျှဝေဖို့။ ငါထင်တာက၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်လေးစားစွာဖြင့်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ PC ကို format ချပြီးပြီလို့ဖြေတာ၊ KDE နဲ့ OpenSuse ကိုထပ်ပြီးတပ်ဆင်လိုက်တယ်၊ Fedora ကို ၄ င်းကို installer ကြောင့်ဖယ်ထုတ်မထားဘူး၊ ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာရိုးရှင်းတဲ့သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ system တွေနဲ့ "fiddle" ကိုလေ့လာရပါမယ်။ ဒါကြောင့်ဖြန့်ဝေမှုတွေရဲ့ downloads တွေဒါကြောင့်သင် system ကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်လာလျှင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ
သင် OpenSUSE ကို Fedora ထက်ပိုကြိုက်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ငါသည်လည်း kde SUSE ၏အမှု၌ပိုမိုပြည့်စုံသောထင်ပါတယ်။ Fedora နဲ့အဆင်မပြေဘူး Netruner သည်လုံးဝမကောင်းပါဘူး၊ အကယ်၍ Ubuntu ကို အခြေခံ၍ စဉ်းစားလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ကျေးဇူးတော်မပါဘဲဖြစ်သည်။
PCliux သည် desktop effect များကို disable လုပ်ပေးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြသနာသည် PC အရင်းအမြစ်များဖြစ်လျှင် KDE ကိုသင်ကြိုးစားလိုပါကကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ
Kubuntu 12.10 64 bit နဲ့ Open Suse ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်ရုံပဲ။ ကြည့်ရတာကြည့်ကြရအောင် ...
မှန်ပါသည်၊ သင်မှန်ပါသည် !!!, ၃ ရက် OpenSuse3ဖြင့်။ ရေတွက်ကြည့်ရအောင်။ Nvidia Geforce driver ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး KDE 12.3 ကိုသူရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားလုံးနဲ့ install လုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ မြန်မြန်ကျွမ်းကျင်စွာအလုပ်လုပ်သည် ငါ Yast ကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ချောမွေ့။ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်…။
အလွန်ကောင်းသော post ကိုငါကလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါမကြာသေးခင်က Fedora 18 ကို win7နဲ့အတူ install လုပ်ခဲ့တယ် (အလုပ်အတွက်လိုအပ်တယ်) ဒါပေမယ့် DVD ဗားရှင်းက install လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ Live version ကနေလုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာပြသနာမရှိပေမယ့် installer နဲ့ startup grub တို့ရဲ့ partitioning system ကိုကျွန်တော်သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ Suse ကိုဒီနေ့နဲ့မနက်ကြားမှာ install လုပ်မယ်၊ ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကြည့်မယ်။ =0ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။
ဟယ်လို! OpenSuse ကို install လုပ်တဲ့အခါအရင်ကကျွန်တော်မဖြေနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Installation သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသီးခြားအခန်းကန့်များတွင် win7 နှင့်အတူ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်မည်သည့်ပြhadနာမှမရှိခဲ့ပါ။ တစ်ခုတည်းသောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် Grub ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည် win7 တပ်ဆင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းကံကောင်းချင်တော့၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ အမှန်တကယ်တွင်အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းမှုများကိုအတူတူပင် desktop တစ်ခုမှပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာတစ်ခုမှာပရိုဂရမ်များစွာကိုတစ်ချိန်တည်းမွမ်းမံရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါနဲ့အတူ KDE desktop ကိုနှစ်သက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ .. အရာအားလုံးကမင်းအတွက်ကောင်းတာပဲ။
packages များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ .. သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်စိတ်ဝင်စားသော software အားလုံးကိုရှာဖွေပြီးရွေးချယ်ပြီးနောက်၎င်းကို (add / remove programs center ၏ဖြစ်ရပ်တွင်) လျှောက်ထားရန်ပေးသော အချိန်မှစ၍ သင် packets များစွာကိုပြwithoutနာမရှိဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ zypper ၏ပုံစံအတွက် terminal ကို program1 program2 program3 install လုပ်ပါ
ကယ်ရိုလိုင်းနားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသင်၏ openSUSE: D ကိုခံစားပါ
ငါ Debian နဲ့အတူလေ့လာပြီးသင်ယူမယ့် linux သင်တန်းကိုငါစတင်ခဲ့တယ်။ ငါ openuse 12.3 ကိုသုံးခဲ့တယ်လို့ဆရာကိုပြောတဲ့အခါသူက Fedora 15 ကိုပြောင်းဖို့ပြောတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတူညီတဲ့ kernel version ကိုသုံးတယ်။ အနည်းဆုံး kernel က 3.x ထက်မကြီးဘူး။ distro နှင့် version ပြောင်းရန် kernel တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွာခြားချက်များစွာရှိပါသလား။
ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါဘူး။ Kernel သည် hardware အသစ်များနှင့် တွဲဖက်၍ driver အသစ်များ၊ ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများနှင့်အညီတိုးတက်လာသည်။ ငါအလုပ်မှာမင်းရဲ့ဆရာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ OpenSUSE 12.3 မှာပဲနေပါ နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဒဏ်sayingာရီမပြောမီဆရာမသင်ယူပါစေ :-) ။ Debian Squeeze အား Debian Wheezy ဖြင့်အစားထိုးတော့မည် (ဗားရှင်းအသစ် ၅ ခုပါ ၀ င်သောဗားရှင်းအသစ်အား ... တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်) ကမ္ဘာပေါ်ရှိစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဖြင့်ဆရာအားသင်ပြောနိုင်သည် ၎င်းကို kernel5incorporated ထည့်သွင်းထားသည်
petercheco, သင့်ရဲ့အဖြေကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သူတို့ကအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ = 0) ဖြစ်ကြသည်။
ငါ ထပ်မံ၍ ဆရာနှင့်ထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်၊ Fedora 18 ကို install လုပ်ခြင်းနှင့်အတန်း၏လေ့ကျင့်မှုများအတွက် Debian6ကို virtualized လုပ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်ကိုသဘောတူခဲ့သည်။
မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုနောက်ကျသွားပြီ။ ဒါကြောင့်ငါက OpenSuse ကိုဖယ်ပြီး Fedora 18 ကိုသွင်းလိုက်ပြီ။ ဒါကြောင့်ငါ heh! Fedora configuration post ကိုသွားမယ်။ ငါဒီစာအုပ်ကိုလွမ်ကွာအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ notebook (၁ လကျော်လောက်) ဝယ်ပြီးကတည်းကငါ distros 1 ခုတပ်ဆင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။
သင် Fedora ကို install ချင်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါ၊ ဒီတစ်ခု၏ KDE version ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Fedora ကို Gnome မှ KDE သို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည် Gnome version ထက် ပို၍ တည်ငြိမ်သဖြင့် .. configuration သည်အတူတူပါပဲ၊ Gnome ကိုသာ install လုပ်ပါ။ အထုပ်များ ..
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ RPMFusion repository ကိုထည့်ပါ။
အခုဆိုရင်ငါတို့ system ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန် repository အတွက် ဦး စားပေး driver တစ်ခုတပ်ဆင်သွားတော့မည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် package yum-plugin-priority များ (add / remove programs center မှ install လုပ်တယ်) ရှိတယ်။
Fedora, Fedora-updates … priority = 1
RPMFusion နှင့် Adobe ... ဦး စားပေး = 2
atrpms ကဲ့သို့သောအခြား Repos များ ... ဦး စားပေး = 10
yum -y ကို install p7zip rar unrar vlc gimp qt-recordmydesktop filezilla libreoffice libreoffice-kde libreoffice-langpack-en
yum -y caligra ဖယ်ရှားပါ *
အကယ်လို့ Skype ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလင့်ခ်ကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်။
Virtualbox ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် Fedora အတွက် repo ကိုကူးယူပြီး /etc/yum.repos.d/ ဖိုင်တွဲသို့ကူးယူပါ။
Fedora 18 KDE ကို download လုပ်ရန်လင့်ခ်သည်။
Hugo Nogueira ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းပေတရုကိုနှုတ်ဆက်သည်။ သင်၏သင်တန်းသားတစ် ဦး ကဤသို့ပြောရန်သင့်အားပြောသည်။ 🙂ငါပြောပါရစေ။ ငါသည် GDome ဗားရှင်းကို KDE ထက် ပို၍ နှစ်သက်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် desktop ပေါ်တွင်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲရိုးရှင်းသောအိုင်ကွန်ကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ လူတိုင်းက Gnome3 ကိုညည်းညူကြပေမယ့်ငါ့ကိုပြproblemနာမရှိသေးဘူး။ ကျွန်တော်မေးချင်တာက 12.3 သို့ပြောင်းသင့်လားဆိုတာပါပဲ။ OpenSUSE ကို ၁၂.၂ နဲ့လုပ်ခဲ့တာကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဖွင့်ရတာအရမ်းနှေးတယ်၊ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ယာဉ်မောင်းနှင့်အမှားတစ်ခု (ငါထင်) ။ ကျွန်ုပ်တွင် OpenSUSE 12.2 disk နှင့် "tadan!" ရရှိသည်။ ၎င်းသည် q12.1 စက္ကန့်အတွင်းစတင်ဖွင့်ပြီး ၆ စက္ကန့်အတွင်းပိတ်ပစ်သည်။ ထိုကဒ်မှကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမကြားဖူးတော့သည်။ ဒါကြောင့် ၁၂.၃ go သွားဖို့ငါကြောက်တာပေါ့
Hugo Nogueira အားပြန်ပြောပါ
ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ်များ၊ ၎င်းသည် kernel (သို့) အခြားကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်ဘရောင်ဇာ၊ ရုံးသုံးကိရိယာသို့မဟုတ်အသံဖွင့်စက်ကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဖြစ်စေ၊ ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ပုံသေပြproblemsနာများရှိနေသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဟောင်းပြproblemsနာများထမြောက်။
သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ Live image (CD သို့မဟုတ် pendrive) တွင် ၁၂.၃ ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ပါကသင်၏လက်ရှိလည်ပတ်မှုစနစ်တပ်ဆင်ထားသည့်အခန်းကန့်ကို backup လုပ်ပြီး 12.3 ကိုတိတ်တဆိတ်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာသင်၏ disk တွင်နေရာချရန်နေရာရှိပါက partition အသစ်တစ်ခုတွင် 12.3 ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ သင့်ကို msx ထားခဲ့သည့်မှတ်ချက်နှင့်လုံးဝသို့မဟုတ်တစ်ထပ်တည်းကျသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရမူ ၁၂.၂ တရားဝင်လွှင့်တင်ခြင်းမတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခဲ့ပြီးမည်သည့်ပြintoနာမှမပါခဲ့ပါ။ ၁၂.၁ နှင့် ၁၂.၂ တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတွက်၎င်းကို livecd တွင်စမ်းသပ်။ မကြောက်ဘဲ update လုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် ATI ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဟောင်းရှိပါက၊ ဗားရှင်း 12.3 အဟောင်းသည် ATI အဟောင်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့် .. ယနေ့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအခမဲ့ driver များနှင့် kernel 12.1 အသစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်ကိုသတိပြုမိမှာပါ။ Gig ram ram ဘာမျှမပါသည့် system နှင့်ပင်ကျွန်ုပ်သည် KDE ကို install လုပ်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ D.
Jojooooo! ခင်ဗျားပြောတာက Intel Wifi အတွက်မောင်းနှင်မှုအားလုံး ... ကောင်းပြီ၊ ငါ Intel Wifi နဲ့ Dell Inspiron 640m ကိုစမ်းကြည့်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ်။ (ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အရမ်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတယ် ... ... ပြီးတော့ install လုပ်ပါ။ ) Intel Wifi ပါ ၀ င်သည့် Gateway 200-ARC နှင့်ကြိုးမဲ့ကဒ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း switch ကို activate နှင့် deactivate လုပ်သော်လည်း၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ငါ terminal command ကိုကြိုးစားပြီး command ကိုမတွေ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်။ ငါလုပ်နိုင်ဖို့တခြားဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ ???
သင်၏ Intel Wifi အတွက်မောင်းနှင်အား ... ဤတွင် Intel PRO / Wireless model သည်ထူးခြားသည်။
သူငယ်ချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သင်အသုံးပြုနေတဲ့ suse လိုအပ်တဲ့ package ကို install လုပ်ရမယ်၊ ဒါကငါတို့သူငယ်ချင်းတွေအဲဒီမှာထားပေးတဲ့ command ကိုသုံးနိုင်ဖို့ kde ထဲမှာမလာပါဘူး။ "sudo zypper in b43-fwcutter in" ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သူငယ်ချင်း၏ command ကို should လုပ်ကြည့်ပါ
သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Intel အတွက် Firmware မရှိတဲ့ခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကေဘယ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး repositories တွင်စတင်ရှာဖွေခဲ့ပြီး၎င်းကိုမတွေ့မီကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။ ၎င်းသည်«ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်လိုအပ်သော»ပေးသည့် dialog တွင်ရှိနေပြီးအိုင်ကွန်သည်သော့ဖြင့်သော့ခတ်တွင်ကျန်ရှိနေသည်။ အခြားထူးခြားမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်လျှင် ...
၎င်းသည် gnome keyring ၏အမှားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းကို network manager အစား yast နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပါ။
Oo နှင့်အခြားအရာ ... ၎င်းသည် SUSE ထည့်သွင်းမှုအမှားဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ CHROME ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းမပြုဘဲပြန်ဖွင့်လျှင် Chromium Address Table နှင့် command line ကိုငါရရှိသည်။ ပျက်စီးသည်။ ၎င်းသည် installation အမှားတစ်ခုကြောင့်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သလား။ Gateway မှာ DVD ဖတ်တဲ့သူကသိပ်မဖတ်တတ်တဲ့အချိန်မှာ Dell မှာအရာအားလုံးဟာဘာမှမရှိသလိုပြေးသွားတယ်။
-> Gateway 200ARC: Pentium M ပရိုဆက်ဆာ (Centrino) 1.5Ghz 1Mb-L2 400Mhz-FSB, Samsung 512Mb DDR266 RAM, 40Gb IDE Samsung disk (မူရင်းပျက်စီးမှုမရှိသောကြောင့်)၊ Pioneer DVD / CDRW combo, Intel 82855 Chipset, Sigmatel Audio STAC9752၊ ကြိုးမဲ့ Calexico2/ Intel PROSet
-> Dell Inspiron E1405: Core2Duo 1.83Ghz 2Mb-L2 667MHz-FSB ပရိုဆက်ဆာ၊ Kingston 3Gb DDR2-800 RAM၊ Fujitsu 60Gb SATA7200 disk (ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်နေတဲ့အလယ်တန်း)၊ Philips Super-Multi DVD + RW, Intel GM945 Chipset, Sigmatel Audio STAC92XX၊ ကြိုးမဲ့ Intel 3945
နောက်တဖန်စိတ်ပျက်စရာ ... မဆို ... ကောင်းပြီ၊ ဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ် SUSE ကိုနှေးကွေးစေရန်တစ်ခုခု?
အဘယ်ကြောင့်ငါ SUSE လိုဂိုကိုမရကြဘူး ??? 🙁
အိုကေဘယ်နှေးလဲ? အခု SUSE လိုဂိုပေါ်လာလားကြည့်ရအောင်… ..
အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်သည်သင်အသုံးပြုသော operating system ပေါ်တွင်မူတည်သည်
en about:config ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (အပေါ်ကဘား), ရှာဖွေရေးရှိပါတယ် general.useragent.override, အပေါ်မှာငါအပေါ်မှာထည့်သွင်း code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ😀
မင်္ဂလာပါ၊ အဲဒါလမ်းညွှန်ကြီးပါ။ ။ မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်၊ ငါမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါ user menu ကိုနှိပ်ပြီး setting ကိုထပ်နှိပ်ပါ (ဤအရာအားလုံးသည် opensuse 12.3 gnome 3.7 ဖြင့်ဖွင့်ပါ) cursor ကတစ်ခုခုတင်နေသည်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာအောင်ဤကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း settings များကိုပြမည့်အစားမျက်နှာပြင်သည်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းစောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်အရံပစ္စည်းများကိုမသုံးနိုင်ပါ။ ပါဝါခလုတ်ဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုသာပိတ်ထားရပါမည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်တူအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Fedora 18 နှင့်အခြား kernel သုံးပြီး grub boot option ကို ပြောင်းလဲ၍ ဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ Fedora ဟာ kernel 3.8 နဲ့စခဲ့ပြီးပconflictsိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော် 3.6 ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးပြtheနာကပျောက်သွားတယ်။ opensuse မှာအဲဒီလိုပဲလုပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ distro မှာ kernel တစ်ခုပဲ ၃.၇ ရှိတယ်။
မဆိုအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်အကူအညီတောင်း? ကျေးဇူးပြု၍ ၉
ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည် gnome shell ၌ကြာမြင့်စွာရှိနေမှသာဖြစ်နိုင်သော်လည်း application အချို့ကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အမှားမဖြစ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် openSUSE သည်ပုံမှန်အားဖြင့် kernel-defeault ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ system အတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းပြsinceနာများကိုမပေးတော့ဘဲဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်မှာ rogue desktop ဒါမှမဟုတ် laptop ရှိရင် kernel-desktop ကို install လုပ်ပါ။
ထိုအသင်၏ပြproblemနာဖြေရှင်းလိမ့်မည် :) ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် pc သို့ opensuse ကိုပထမဆုံး install လုပ်ခြင်း ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည် drive များကိုကျေးဇူးတင်စွာ install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Open open Suse ကို install လုပ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အင်တာနက်ကိုမချိတ်ဆက်ပါ။ သို့သော် network device ကိုတွေ့ရှိပါကမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ လက်စွဲရှိသည့်နေရာကိုမည်သို့မည်ပုံသိရှိရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ရှင်းပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
OpenSUSE တွင် Network Manager ကိုဖွင့်ရန်လမ်းညွှန်မှာဤတွင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်တရားဝင်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
Google Reader ဆုံးပါးသွားပြီ
Kanotix2013 ကို Steam နှင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်